Afghanistan v Zimbabwe in UAE, 2018 Squads, Venues
5 ODI, 2 T20, 5 Feb, 2018 - 19 Feb, 2018
Afghanistan beat Zimbabwe in 5th ODI, Seal Series 4-1
Feb.19 (CRICKETNMORE) - Leg-spinner Rashid Khan starred as Afghanistan beat Zimbabwe by 146-runs in the fifth and final one-day international at Sharjah on Monday. Afghanistan wrapped up a dominant 4-1 series win ...
Afghanistan hammer Zimbabwe by 10 wickets in 4th ODI
Feb.17 (CRICKETNMORE) - Afghanistan registered a 10-wicket thumping victory over Zimbabwe in the fourth ODI at Sharjah on Friday. The win sealed the series for Afghanistan, continuing their historic domination ...
Sikandar Raza fined for showing dissent
Feb.14 (CRICKETNMORE) - Zimbabwe’s all-rounder Sikandar Raza has been fined 15 per cent of his match fee for breaching the ICC Code of Conduct during the third One-Day International against ...
Rashid Khan guides Afghanistan to six wickets victory against Zimbabwe
Feb.13 (CRICKETNMORE) - Afghanistan beat Zimbabwe by 6 wickets in the 3rd ODI at sharjah on Tuesday. The leg spinner from Afghanistan, Rashid Khan took 5/24 as Zimbabwe were bowled out ...
Zimbabwe beat Afghanistan by 154-runs in 2nd ODI
Feb.12 (CRICKETNMORE) - Zimbabwe beat Afghanistanby 154 runs in the 2nd of five One-Day Internationals in Sharjah on Sunday. SCORECARD Batting first, Zimbabwe put themselves in command with Taylor (125) ...
Feb.8 (CRICKETNMORE) - Afghanistan come into the first fixture of the five-match series with momentum on their side after sweeping the T20I series 2-0. All roads lead to the famous Sharjah ...
Afghanistan beat Zimbabwe by 17 runs in 2nd T20I
Feb.7 (CRICKETNMORE) - Afghanistan beat Zimbabwe by 17 runs in Sharjah to claim the two-match T20I series 2-0 and move past Sri Lanka into eighth in the latest ICC Men's Team ...